बंगलादेशमा रहेका नेपाली चिकित्सक आवद्ध जेडीसीद्धारा राजदूत मिश्रको स्वागत
१३ मंसिर, बंगदलादेश । बंगलादेश रेजिडेन्टको स्टाइपेडको समस्या हल गर्नका लागि नेपाल चिकित्सक संघ अन्तर्गत रहेको बंगलादेशी जेडीसीमा आवद्ध नेपाली चिकित्सकहरुले नेपाली राजदूत वंशीधर मिश्रलाई स्वागत गरेको छन् ।
बंगबंधू शेख मुजीब मेडिकल विश्वविद्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मिश्रलाई स्वागत गरिएको हो ।
जेडिसी बंगलादेशका अध्यक्ष डा. राकेश साह, सचिव डा. आशीष रायलगायतका नेपाली चिकित्सकको टोलीले राजदूत डा. मिश्रलाई स्वागत गर्दै नेपाली आवासीय चिकित्सकका पारिश्रमिक (स्टाइपेड) आवास र अन्य समस्याका बारेमा पनि छलफल गरिएको बताइएको छ ।
सोहि अवसरमा डा. मिश्र र उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा कनक कांति बारुवाबीच समेत भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्तामा आवासिय चिकित्सकको स्टाइपेड, आवास लगायतका समस्याका बारेमा छलफल भएको जेडिसी बंगलादेशका अध्यक्ष डा. राकेश साहले संसारन्युजलाई जानकारी दिएका छन् । भेट वार्तापछि राजदूत डा. मिश्रले उपकुलपति डा. बारुवाले नेपाली चिकित्सकको समस्या समाधान गर्न आफू गम्भीर ढंगले अघि बढ्ने आश्वासन दिएको चिकित्सकहरुलाई बताएका थिए ।
नेपाली चिकित्सक डा.राकेश साहका अनुसार बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालयमा झण्डै सयजना चिकित्सकले एमडि एमएस MD/MS गर्दैछ । उनीहरुका लाथि विश्वविद्यालयले दिनुपर्ने स्टाइपेन्ड तथा आवासको सुविधा ( Residency Program) सुरुदेखिनै समस्या देखिएको विद्यार्थीहरुले बताउँदै आएका छन् ।